Xiaomi dia hametraka fiasa vaovao amin'ny fidirana mivantana amin'ny apps amin'ny alàlan'ny mpamaky ny dian-tànana eo amin'ny efijery mankany amin'ny Mi 9 sy Mi 9 SE | Androidsis
Xiaomi dia hametraka fiasa vaovao amin'ny fidirana mivantana amin'ny apps amin'ny alàlan'ny mpamaky ny dian-tànana eo amin'ny efijery mankany amin'ny Mi 9 sy Mi 9 SE
Xiaomi dia hampihatra fiasa iray ahafahan'ny fampiasana ny mpamaky ny rantsan-tànana amin'ny efijery hanokatra mivantana sy haingana ny rindranasa rehetra. Ity dia hanao izany amin'ny vaovao Xiaomi Mi 9 y Mi 9 SE.
Ny mpivady vao manomboka amin'ny marika dia hahazo an'io endri-javatra mahasoa io. amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao manomboka amin'ity herinandro ity. Ny fanavaozam-baovao MIUI fa hivoaka ao amin'ireo fitaovana farany avo roa farany ilay goavambe sinoa farany dia ahafahan'ny tsirairay manohina tsotra izao ny faritra mpamaky ny dian-tànana hanokatra hitsin-dàlana.
Mampiasa ny fiasa, ny mpampiasa dia mila manindry lava ny mpamaky ny rantsan-tànana amin'ny efijery. Aorian'izany dia hiseho ny menio misy hitsin-dàlana isan-karazany ary ny mpampiasa dia tsy maintsy mamafa ny rindranasa na fiasa tiana hanokafana azy. Ankoatry ny fanokafana rindranasa, ny fampiasa hitsin-dian-tanana vaovao dia azo ampiasaina hiantsoana ny mpanampy ny feo Xiao AI, hanokatra ny efijery fandoavam-bola amin'ny finday, sy maro hafa. (Fantaro izy: Ny vidin'ny Xiaomi Mi 9 any Espana dia efa ofisialy)
Ankoatra ny Xiaomi Mi 9 sy Mi 9 SE, ny fiasa dia ho hita na amin'ny fitaovana Xiaomi hafa aza, fa ireo manana mpamaky rantsantanana anaty efijery ihany: ireo My 8 Pro dia efa voamarina andro vitsy lasa izay, ary angamba tsy ho ela dia hipetraka ny endri-javatra My 8 Explorer Edition, izay telefaona Xiaomi voalohany eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny mpamaky rantsan-tànana mora tohina amin'ny tsindry. Mety ho tao amin'ny Mi 9 Fanontana mangarahara.
Ny fanavaozana ny Xiaomi Mi 9 SE sy Mi 9 SE koa hitondra fanatsarana fakan-tsary ho an'ny telefaona roa- Hisy maodely fakantsary 48 MP vaovao, maodely zoro malalaka misy fanohanana tselatra ary maro hafa.
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay, mitondra fanavaozana fiarovana vaovao ny fanavaozana. Mba hijerena raha toa ka mihazakazaka ao amin'ny singa misy anao izy ity, azonao atao ny mankanesana ao amin'ny menio Settings ary manamarina ny fampahalalana momba ny fizarana fitaovanao, avy eo kitiho ny fanavaozana ny lozisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Xiaomi dia hametraka fiasa vaovao amin'ny fidirana mivantana amin'ny apps amin'ny alàlan'ny mpamaky ny dian-tànana eo amin'ny efijery mankany amin'ny Mi 9 sy Mi 9 SE
Samsung Wearable dia misy miaraka amin'ny endrika UI iray